एलईडी परिधान र सहायक उपकरण
एलईडी पेय पदार्थ
एलईडी टोपी र हेडवेयर
एलईडी पार्टीको पक्षमा
हेलोवीनको परम्परागत खेलहरूमा भूत भएको नाटक गर्ने, स्याउ काट्ने र कद्दिन लालटेन बनाउने समावेश छ?
1. भूत भएको नाटक गर्नुहोस्: हेलोवीन वास्तवमा पश्चिममा भूत उत्सव हो। यो भूत आउने र जाने दिन हो। मानिसहरू तिनीहरूलाई भूत जस्तै डराउन चाहन्छन्। त्यसैले यस दिन धेरै मानिसहरू अनौठो लुगा लगाएर, भूत भएको नाटक गर्ने र सडकमा घुम्ने गर्छन्। त्यसैले डरपोक मानिसहरूले...
मलाई हेलोवीनको लागि के तयारी गर्न आवश्यक छ?
1. हेलोवीनमा क्यान्डी तयार गर्नुहोस्, तपाईं दिन र रातमा सँगै भेला हुन सक्नुहुन्छ, वा तपाईं मिठाईहरू माग्न साथीको घरमा जान सक्नुहुन्छ। त्यहाँ एक भनाइ छ कि "चाल वा उपचार" हेलोवीन को लागी एक आश्चर्य हो। त्यसैले आजको दिन क्यान्डी अनिवार्य छ। 2. जादुई पोशाकहरू तयार गर्नुहोस् जादुई पोशाकहरू ...
ज्याक-ओ-लान्टर्न के हो, र ज्याक-ओ-लान्टर्नको कारण के हो? चाडपर्व संस्कृति ?
हेलोवीन इभ दुष्ट भूतहरूसँग सम्बन्धित उत्सवहरूबाट उत्पन्न भएको हो, त्यसैले बोक्सीहरू, भूतहरू, गोब्लिनहरू र ब्रूमस्टिकहरूमा कंकालहरू हेलोवीनका सबै विशेषताहरू हुन्। चमेरो, उल्लु र अन्य निशाचर जनावरहरू पनि हेलोवीनको सामान्य विशेषता हुन्। सुरुमा, यी जनावरहरूले धेरै डरलाग्दो महसुस गरे किनभने यो सोचिएको थियो ...
हेलोवीनको लागि के खेल्ने? सबैभन्दा लोकप्रिय हेलोवीन वातावरण वस्तुहरू यहाँ छन्!
1. चमकदार मास्क मास्क, हेलोवीनको लागि हास्यास्पद आवश्यक वस्तुहरू मध्ये एकको रूपमा, हेलोवीन वातावरण उत्पादनहरूको लागि सधैं सदाबहार रूखहरू भएको छ। साधारण साधारण मास्कदेखि अहिले रंगीन चमकदार मास्कहरू, क्यारेक्टरहरूदेखि अनुहारको मेकअपसम्म जनावरको टाउको कार्टुन क्यारेक्टरहरू, t...
ENG औद्योगिक कं, लि
प्रदर्शनी हल ठेगाना: 14/F, Yongtong भवन। रेन्मिन उत्तरी रोड, लुओहु जिल्ला, शेन्जेन
शेन्जेन नोभिट इलेक्ट्रोनिक
उत्पादन आधार: 200-1, shilianxin रोड, WulianZhugu, Longgang जिल्ला, शेन्जेन
परामर्श हटलाइन: ८६-७५५-८२३७४२८६
ठेगाना: 14 औं तल्ला, ब्लक ए, योङटोङ बिल्डिंग, 3146 रेन्मिन नर्थ रोड
© प्रतिलिपि अधिकार - २०२१: सर्वाधिकार सुरक्षित। तातो उत्पादनहरू - साइटम्याप
एलईडी पन्जा, चम्किने लठ्ठी, एलईडी स्टिक, नेतृत्व स्पिनर, नेतृत्व टम्बलर, हल्का तरवार,